June 27, 2011 – democracy for burma
တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အစိုးရစစ်တပ် ၂ ဦး ကရင်နီတပ်နှင့် ပူးပေါင်း
On June 27, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကရင်နီတပ်မတော်နှင့် အစိုးရတပ်တို့ ကရင်နီပြည်နယ် ရှားတောမြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အစိုးရတပ်မှ တပ်သား ၂ ဦး ကရင်နီတပ်နှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကရင်နီတပ်မတော်မှ ဗိုလ်ဦးရယ် ဦးဆောင်သော စစ်ဦးစီးတပ် တပ်ဖွဲ့သည် အစိုးရတပ် ခမရ ၅၇၅ တပ်ဖွဲ့နှင့် ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ရှားတောမြို့နယ် သံလွင်မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းဒေသရှိ ဒေါတခဲကုန်းနှင့် တောင်သုံးလုံး အကြားတွင် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြ၍ အစိုးရတပ်ဘက်မှ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု ကရင်နီတပ်မတော်က ပြောပြသည်။
ထို့နောက် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရှားတောမြို့နယ်၌ အခြေစိုက်ထားသော အစိုးရတပ် ခမရ ၃၃၂ မှ တပ်သားဖြစ်သူ တင်းဝင်း အသက် ၂၃ နှစ်နှင့် စောခူသစ် အသက် ၂၅ နှစ်တို့သည် လက်နက် အပြည့်အစုံနှင့်အတူ ရှားတောမြို့နယ်၌ လှုပ်ရှားနေသော ကရင်နီတပ်မတော်မှ ဗိုလ်တော်ရယ် ဦးဆောင်သော ခရိုင် ၁ တပ်ခွဲ ၃ တို့နှင့်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟု ကရင်နီဗဟိုသတင်းအဖွဲ့မှ ဗားမားနိုင်က ပြောသည်။
အစိုးရစစ်တပ် ၂ ဦး နယ်စပ်ကုန်း အမှတ် ၂၈၈၈ မှ ကရင်နီတပ်မတော်၏ အမာခံ ညာမို တပ်စခန်းသို့ လက်နက်ဖြင့် ချိန်ဆလေ့ကျင့်နေစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
“တပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်နီ ဆိုတာ တယောက် ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီတပ်ကြပ်ကြီးက သူ့တို့ကို အလုပ် တအားခိုင်းတယ်။ နောက် သူ့တို့အပေါ်မှာ ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီး နာအောင် ဆဲဆိုတယ်တဲ့။ အဲဒါ သူတို့ ဂိတ် သွားကျတဲ့ အချိန်မှာ ထွက်ပြေးလိုက်တာ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကရင်နီတပ်နှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သော ၎င်းအစိုးရစစ်တပ် ၂ ဦးသည် MA-1 သေနတ် ၂ လက်၊ ကျည်ဘောက် ၉ ချပ်၊ ကျည်ဆံ ၂၄၀ တောင့်နှင့် equipment ၂ စုံတို့နှင့် ပါလာကြသည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
တင်းဝင်း၏ ကိုင်ပိုင်နံပါတ်မှာ တ/၃၄၇၁၀၂ ဖြစ်ပြီး စောခူသစ်၏ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်မှာ တ/၃၂၆၁၂၄ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကရင်နီတပ်မတော်တို့နှင့်အတူ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အလုပ်ကို လုပ်မည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း ဆိုသည်။
ခမရ ၃၃၂ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခုံမြို့၌ အခြေစိုက်ထားသော စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (စကခ) ၁၇ ၏ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ဖြစ်သည်။
Ruby trade hides Myanmar slavery.-video
Security Increased In Mon State Following Bomb Blasts and Conflicts
On June 27, 2011 June 27, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Independent Mon News Agency – Following the ongoing conflict in Kachin State and several bomb blasts last week in major cities of upper Burma, including in the capital city Naypyidaw, the Southeast Region Command has strengthened the security force in Mon State and set up checkpoints in many of the main cities and towns in Mon State.
A military check-point before the entrance of Moulmein (Mawlamyaing), the capital of Mon State
The checkpoints have been set up at the entrances of Thanbyuzayat and Mudon, as well as in Moulmein (Mawlamyaing), the capital of Mon State. These checkpoints were dismantled after the elections in 2010, but now the local villagers report that the Burmese Army is setting them up again. Continue reading “Security Increased In Mon State Following Bomb Blasts and Conflicts” →
On June 27, 2011 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Wa asks for the world’s understanding regarding drugs
Chinese and Burmese gem traders clash in Mandalay
Chiang Mai (Mizzima) – A fight broke out between ethnic Chinese gem traders and local Burmese gem traders atagem market in Mahaaungmyay Township in Mandalay on Monday morning. The gem market was closed after the clash.
Police arrested some participants inaclash between Chinese gem traders and Burmese gem traders atagem market in Mahaaungmyay Township in Mandalay on Monday, June 27, 2011. Photo: Citizen journalist
The fight started after Chinese traders refused to buyajewel although they had earlier reached an agreement on the price, according to gem traders at the market.
Although the reason for the fight is not clear, residents said that Chinese traders reportedly assaultedaBurmese trader and Burmese residents came to his defence.
‘Many Burmese people surroundedashop where the Chinese people were. So police from five townships came to the market. The administrative office ordered the people to disperse, but more and more Burmese gathered. Later, police escorted the Chinese traders out of the market viaapolice car’,aresident said on his Facebook page.
A police official at Police Station No.7in Mandalay said by telephone, ‘It’sagem market, and it was inastate of turmoil. Officials are still investigating’.